Askarigii U Dambeeyey Ee Maraykan Ah Oo Ka Baxay Afghanistan Iyo Taalibaan Oo La Wareegtay Ammaanka Garoonka Diyaaradaha Ee Kabul – somalilandtoday.com
Askarigii U Dambeeyey Ee Maraykan Ah Oo Ka Baxay Afghanistan Iyo Taalibaan Oo La Wareegtay Ammaanka Garoonka Diyaaradaha Ee Kabul
(SLT-Kabul)-Militariga Mareykanka ayaa soo afjaray daadgureyntii ay ka wadeen Afghanistan, taas oo ka dhigan in uu soo dhammaaday ololihii uu bilaabay George W Bush wixii ka dambeeyay September 11-keedii labaatan sano ka hor.
Rasaas dabaaldeg ah oo ay ridayaan Taliban ayaa la maqlayey kadib markii diyaaraddii ugu dambeysay ee Mareykanku leeyahay ay baxday.
Bixitaanka diyaaraddaas ugu dambeysay ayaa muujineysa dhammaadkii dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanka, iyo dadaal daadgurayn ballaadhan ahaa oo billowday 14 -kii Ogoosto, wax yar ka dib markii Taliban ay qabsatay waddanka.
Gen McKenzie o o dusha kala socday soo bixitaanka Mareykankaayaa sheegay in guud ahaan, diyaaradaha Mareykanka iyo isbahaysiga ay daadgureeyeen in ka badan 123,000 oo rayid ah, taas oo celcelis ahaan noqoneyso in ka badan 7,500 oo rayid ah maalintiiba.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobayna waxa uu meel mariyay qaraar ugu baaqaya Taalibaan in ay hubiyaan nabadgelyada marinka ay marayaan dadka isku dayaya in ay ka baxaan Afghanistan.
Waxa kale oo uu goluhu ku baaqayaa in dalku aanu noqon hoyga argagixisada, isagoona ku boorinaya dawladda uu Taalibaanka hoggaamiyo inay ixtiraamto xuquuqda haweenka, gabdhaha iyo dadka laga tirada badan yahay oo ay oggolaato helitaanka bani’aadamnimo ee aan la hor istaagin.
Goluhu wuxuu rajaynayay inuu soo bandhigo jawaab midaysan oo caalami ah oo ku aaddan xiisadda taagan, laakiin Shiinaha iyo Ruushku ayaa ka aamusay codbixinta.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka, Anthony Blinken, ayaa sheegay in la bilaabay cutub cusub oo hawlgal ku saabsan Afgaanistaan, kaas oo Ameerika ay hoggaamin doonto dhanka diblomaasiyadda. Waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya gargaarka Afghanistan aan la soo marin doonin dowladda Afganistan balse uu soo mari doono hay’adaha madaxa bannaan. Waxaana hadalladiisa ka mid ahaa:
“Mareykanku wuxuu sii wadi doonaa taageerada gargaarka bani’aadamnimo ee uu siiyo dadka reer Afgaanistaan. Si waafaqsan cunaqabateynta Daalibaan, gargaarku ma soo mari doono dowladda ee wuxuu soo mari doonaa hay’ado madaxbannaan sida hay’adaha Qaramada Midoobay iyo NGO -yada kale. Waxaana filaynaa in dadaalladaasi ay Taalibaan iyo cid kale toona aysan hor istaagin. ” ayu yidhi Blinken
Waxa uu sidoo kale sheegay, in in kasta oo Mareykanku joojiyay joogitaankiisii diblomaasiyadeed ee Kabul, una wareejinayo howlgallada Doha, xuu sii wadi doono “dadaallada aan kala joogsiga lahayn” ee lagu caawinayo dadka Mareykanka ah, iyo dadka reer Afgaanistaan ee haysta baasaboorada Mareykanka, si ay uga baxaan Afghanistan haddii ay doonayaan.
Mr Blinken ayaa ahaa xubnihii ugu horreeyay ee ka tirsan golaha wasiirrada Biden ee ka hadla bixitaanka ciidamada Mareykanka.
Madaxweyne Joe Biden ayaa soo saaray qoraal kooban oo uu ugu mahadcelinayo dhammaan dadkii ku lug lahaa hawlgalkii daadgureynta ee socday 17 -kii maalmood ee la soo dhaafay, isagoona sheegay ingelinka danbe ee Tallaadada uu khudbad u jeedin doono shacabka reer Mareykan.
Dhan kale Qaar ka mid ah xubnaha hoggaanka Taalibaan ayaa la sheegay inay soo gaadheen garoonka diyaaradaha ee Kabul, waxayna wariyeyaasha kula hadlayeen dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan.
Wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganeysa afhayeenka Talaibaan Zabihullah Mujahid ayaa yidhi: “Hambalyo Afghanistan … guushan annagaa iska leh”. “Waxaan dooneynaa inaan xidhiidh wanaagsan la yeelano Mareykanka iyo caalamka. Waxaan soo dhaweyneynaa xidhiidh diblomaasiyadeed oo wanaagsan dhammaanteen,” ayuu raaciyay.